30 Hondo Yemunamato Pfungwa Pamusoro peKutemba Mhondi | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Hondo Yemunamato Pfungwa Pamusoro peKutemba Mhondi
30 Hondo Yemunamato Pfungwa Pamusoro peKutemba Mhondi
Pisarema 62: 2
2 Iye oga ndiye dombo rangu noMuponesi wangu; Ndiye chishamiso changu; Handizozununguswi kwazvo.
Mwana wega wega Mwari ane mbiri yakajeka. Hakuna mwana waMwari akagadzirwa kuve mukochekera muhupenyu. Iwe uri mwana wekufanirwa, ramangwana rako rakajeka, nekuti Mwari pachavo vakazviita. Tinofanira kunzwisisa kuti dhiabhori ndiye muvengi arch wevanhu uye achaita zvese zvinobvira kuparadza destiny yako. Chinangwa chinogona kutsanangurwa sewakarongerwa kwauri kuenda muhupenyu. Muna Jeremiah 29:11 Mwari akativimbisa mugumo une mbiri uye unotarisirwa. Yako yakajeka tariro zvehondo munamato mapoinzi. Ini ndakanyora makumi matatu ehondo munamato mapoinzi kune vanofungidzira kuuraya, aya mafambiro anouraya ndevomweya uye vamiriri vevanhu verima vakatumwa naDhiabhori kuti akumise kukukonzeresa zviroto zvako. Unofanira kuzvidzivirira muminamato.
Hupenyu ihondo, unofanira kurwira kurwa kwekutenda kuti ubudirire muhupenyu. Hapana chinogona kumisa muKristu anonamata. Hapana dhiabhori anogona kumira munzira yako kubudirira. Iwe unofanirwa kusimuka uye kurwira yako yakajeka destiny. Hupenyu hwako hahusi mumaoko emunhu, kunyangwe mumaoko aMwari, iwo ari mumaoko ako. Kusvikira iwe utore matanho, hapana chinoitika. Kuti iwe ukunde vanouraya mafambiro iwe unofanirwa kusimuka uye kuenda kune zviroto zvako, usafambiswe nevanokuseka, usarega maTobias nema sanballats eino nyika kukuodza mwoyo, saNehemiya mubhaibheri usatorega hope dzako. Pawoiwo hondo dzekunamatira idzi dzekupokana nevaurayi vekupedzisira kuti vavanyaradze mumweya nemuviri. Usakundwa nezvakaipa, asi ukunda zvakaipa nezvakanaka, uye kana uchiita iyi minamato yehondo, uri kuita zvakanaka naMwari. Ndiri kuona Mwari achinyadzisa vese vanofungidzira kuuraya munzira dzenyu muzita raJesu.
1. Oh Mwari simuka muparadzire vavengi vangu vese muzita raJesu
2. Baba, ndinotema kunyadziswa kuzere pamusoro pevose vanozouraya nzira munzira yaJesu
3. Hakuna nhumbi yokuodza moyo yakagadzirirwa kundirwisa ingabudirira muzita raJesu.
4. Ini ndinotuka rurimi rwese kutaura zvinopesana nezvangu
5. Dai vese vanotsvaga nyadzi dzangu vapiwe kunyadziswa paruzhinji muzita raJesu
6. Dai vese vanofara nekudonha kwangu vabhabhatidzwe nekusuwa muzita raJesu
7. Dai vese avo vari shure kwehupenyu hwangu vawe nekuda kwangu muzita raJesu
8. Rega ruoko rwako rune simba riputse mashure evavengi vekufemba kwangu muzita raJesu
9. Rega vese vanondirova varwiswe nengirozi dzehondo muzita raJesu
10. Munhu wese anofunga saMwari muhupenyu hwangu ngaabviswe zita raJesu.
11. Ini ndinotema kuti ndichauya pamusoro muhupenyu muzita raJesu
12. Ini ndinotemaira kuti hapana nyika ichave yakanyanya kundiomera kukunda muzita raJesu
13. Ini ndinotema chirevo kuti vavengi vangu vandishandire muhupenyu hwuno muzita raJesu
14. Ini ndinotema kuti hapana chombo chakagadzirirwa kurwisa ini uye zvandinoziva zvichabudirira muzita raJesu
15. Ini ndinotema kuti kukundikana hakugone kundimisa muzita raJesu
16. Ini ndinotema kuti handimisike muhupenyu muzita raJesu
17. Ini ndinotema chirevo kuti handisi kugona muzita raJesu
18. Ini ndinotema kuti handishorwe muzita raJesu
19. Ini ndinotemaira kuti hakuna murume anogona kumira pamberi pangu nemazuva ose ehupenyu hwangu muzita raJesu.
20. Ini ndinotema kuti ini ndinotonga nekutonga pakati pevavengi vangu muzita raJesu.
21. Ini ndinoparidza kuti sezvazvaive mumazuva aJoseph, vese vakaurayiwa vangu vachauya kuzondinamata muzita raJesu
22. Ini ndinomirisana nechero simba rekupokana nekubuda kwangu muzita raJesu
23. Ini ndinomira ndichipesana nemweya wega wega satanic kubva pandanga ndichiita muna Jesu zita
24. Ini ndinemaira kumira kune chero tsika dzakashata dzinorwa nekuperera kwangu muzita raJesu
25. Ndinozvinyudza pasi neropa raJesu
26. Neropa raJesu, ndinogeza!
27. Neropa raJesu, ini ndinokunda simba rega rese rekupokana nehupenyu hwangu muzita raJesu
28. Ini ndinozvisimbisa nemweya unoyera muzita raJesu
29. Ini ndinosimbisa imba yangu ne mweya dzvene muzita raJesu
30. Ini ndinotema kuti ramangwana rangu rakajeka muzita raJesu.
Previous nyayaMumi minamato Yekunamatira Pamusoro pekusvibiswa
inoteveraMinamato yeBudiriro uye Prosperity
Cyril Foray Kurume 16, 2019 Pa 12: 32 am
Munhu wa Mwari ndinokumbira unditsigire muminamato. Ndokumbira kuti mundinamatirewo kune vanoponda magumo, matambudziko ekutanga, vaparadzi vekurota, varume vakasimba & vakadzi mumhuri yangu, Mwari akuropafadzei sezvamunoita.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Kurume 16, 2019 At 12:14 pm
Mwari vakuropafadzei Cyril, isu tinogara tichinamatira vaverengi vedu. Hondo yega yega yeramangwana rako uye matambudziko ekutanga akundwa izvozvi !!! muzita raJesu. Ameni
Minamato Yesimba uye Kuzodza
ZVINOTAURA BHAIBHERI ZVEKUSVEDZIRA
20 Minamato Yehondo Yekunamata Vafundisi
30 Munamato wekubvisa mweya Yekusada Mwari